यातायात ब्यवसायी भन्छन् ‘सरकारले रोकेर रो किन्नौं असार १८ देखि सबै गाडी झि क्छौं’, चल्ला त सार्वजनिक सवारी? – List Khabar
Home / समाचार / यातायात ब्यवसायी भन्छन् ‘सरकारले रोकेर रो किन्नौं असार १८ देखि सबै गाडी झि क्छौं’, चल्ला त सार्वजनिक सवारी?
यातायात ब्यवसायी भन्छन् ‘सरकारले रोकेर रो किन्नौं असार १८ देखि सबै गाडी झि क्छौं’, चल्ला त सार्वजनिक सवारी?
admin June 29, 2021 समाचार Leaveacomment 68 Views
काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलोसँगै २५ सिट माथिका स वारी साधन जोर विजोरका आधारमा चलाउन पाउने भन्दै स्थानीय प्रशासनले नियम लागू गरेपछि यातायात ब्यवसायीले वि रो ध गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सरकारी नियमको अवज्ञा गर्ने चे ता वनी दिएका छन् । उनीहरुले सबै सार्वजनिक यातायात असार १८ गतेदेखि संचालन उद्घोष गरेका छन् ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भएका ६ लाख सर्वाजनिक यातायातमध्ये २५ सिट क्षमताभन्दा माथिका मात्रै सञ्चालन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा मंगलवारवाट केही सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा आएका छन् । स्थानिय प्रशासनको यस्तो निर्णयले १२ हजार मात्रै सञ्चालन हुने भएको छ । अन्य यातायात साधन थन्क्याएर राख्नुपर्ने बाध्यता भएकाले सरकारको निर्णयको विरोध गरेको व्यवसायीको भनाइ छन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सरकारको ठूला सवारीसाधनमात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णयले थोरै सवारीसाधन संचालन हुँदा भीडभाड भएर कोरोनाको जोखिम बढ्ने भएकाले सबै असार १८ गतेबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने बताए ।
Previous मलेसियाबाट आयो खुसीको खबर, तुरुन्तै पढ्नुहोस् !
Next भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्य घट्यो, घटेर कति पुग्यो तेलको मूल्य (हेर्नुहाेस्)